F“Emilson Daniel Andriamalala” teny amin’ny Akademia Malagasy teny Tsimbazaza notarihan’ny filohany, Ranjeva Raymond omaly alatsinainy 22 oktobra ka notohizana teny amin’ny Tahala Rarihasina misy ny foiben-toeran’ny Havatsa Upem. Fotoam-pivavahana fangataham-pitahiana ho an’ny fanahiny sy fisaorana an’Andriamanitra kosa no notontosaina teny amin’ny fiangonana Fjkm Itaosy, omaly alatsinainy io ihany. Ambetin-dresaka tany amin’ireo toerana 3 ireo ny maha avo lenta ny asa soratr’ity akademisianina Malagasy ity. Na dia ny fitiavana tonga lafatra sy ny fitiavan-tanindrazana aza no nifanindran-dalana tao anatin’ireo tantara nosoratany toy ny tao amin’ny Zazavavindrano, ny Fofombadiko, ny Hetraketraka ary Ilay Vohitry ny Nofy dia nasongadin’ireo zanany sy vinantony kosa fa hentitra tamin’ny fitaizana ny zanaka vavy izy fony fahavelony. Marihana fa efa tafiditra ao amin’ny tahirin’ny Unesco ireo asa soratr’i ED Andriamalala ireo.
Nomarihan’ny fianakaviany koa omaly fa amin’ny 25 mey taona 2019 dia hisy indray ny fahatsiarovana ny faha-40 taona nametrahan’i ED Andriamalala ny penina tanteraka.